Climacteric syndrome ရောဂါ - ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထင်ရှားသလဲ? Climacteric syndrome ရောဂါ - လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များ
Climacteric syndrome ရောဂါ - အမျိုးသမီးအားလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချဖို့ဘယ်လို?
အမျိုးသမီးမျိုးပွားစနစ်၏မျိုးသုဉ်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေရှည်လျား menses ၏ရပ်စဲမတိုင်မီလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သရုပ်၏ပေါင်းစပ်သွေးဆုံးဟုခေါ်သည်။
Climacteric syndrome ရောဂါ - ကဘာလဲ?
သွေးဆုံးရောဂါ - လက္ခဏာတွေတစ်ဦးစုဆောင်းမှု, ထိုမျိုးဆက်ပွားစနစ်၏တဖြည်းဖြည်းနွမ်းညွှန်ပြကြောင်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့် display တွေ။ အဆိုပါရောဂါ၏ပထမဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေဟာစဉ်အတွင်းပေါ်လာ Pre-သွေးဆုံး ခြင်းနှင့်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အချို့ကိစ္စများတွင် သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီး ။ အဆိုပါရောဂါ၏ကြာချိန်ကြီးမားတဲ့အချိန်ဘောင်ရှိပါတယ် - က (30% အမျိုးသမီးများကို) ဟောင်း5နှစ်လပေါင်းများစွာကနေကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
အခြိနျမှနျမှသွေးဆုံး၏လူနာများရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ထက်ဝက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခံစားခဲ့ရပါစေ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိုက်တဲ့အခါသွေးဆုံးရောဂါ, ရောဂါလက္ခဏာတွေ 5-10 နှစ်ပေါင်းဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ ဆေးသမား၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရသူတို့ကိုအမျိုးသမီးတွေရှာကြံတိုင်ကြားချက်အရသိရသည် climacteric syndrome ရောဂါဟာသွေးဆုံးရှေ့နှစ်တွင်ကြီးမြတ်သောပြင်းထန်မှုရှိသည်, ထို့နောက်သူတို့ပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းလျှော့ချ။ သို့သော်ပြည့်စုံပျောက်ဆုံးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Climacteric syndrome ရောဂါ - pathogenesis
သွေးဆုံးရောဂါကိုထင်ရှားစွာပြဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆရန်, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအဓိက predisposing အချက်မှပေးဆောင်ရပါမည်။ စတင်ခြင်းညွှန်ပြလက္ခဏာများများ၏အကြောင်းရင်း သွေးဆုံး၏ , ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တည်ရှိသည်။ လိင်ဟော်မုန်းများ၏ပေါင်းစပ်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း - အီစရိုဂျင်။ ဤရွေ့ကားတ္ထုများဟာမျိုးဆက်ပွားစနစ်၏လည်ပတ်ထိန်းချုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုထိခိုက်မသာ။ အဆိုပါနှလုံးသွေးကြောများနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုသူတို့ရဲ့မရှိခြင်း (ဤအသေကောင်အားဖြင့်ချိုးဖောက်မှုများသွေးဆုံးကာလတှငျမှတျတမျးတငျထားသကြသည်) ။
ဒါဟာရင့်ကျက်အသက်အရွယ်အပေါငျးတို့သအမျိုးသမီးတွေကိုဘုံမျိုး၏ပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုရပါမည်။ သို့သော်သူတို့၏ဖြစ်ပျက်မှု၏အချိန်, ပြင်းထန်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ရောဂါဗေဒ climacteric syndrome ရောဂါလုံးဝသူတို့ရဲ့ဘဝလမ်းကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်လက္ခဏာများဖြစ်သည့်အခါပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ မျိုးပွားစနစ်၏ဇီဝကမ္မသုဉ်း၏နှောင့်အယှက်, ရောဂါအထူးကုအောက်ပါအချက်များမှအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောအဖြစ်:
စိတ်ဖိစီးမှုသည် endocrine နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်များချို့ယွင်း;
ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေအတွက် menopause သနည်း?
သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပထမဦးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေချက်ချင်းနီးပါးရာသီ၏ချုပ်ရာအပြီးဒါမှမဟုတ်သွေးဆုံးနှစ်တာကာလအတွင်းပေါ်လာပါသည်။ မကြာခဏဆရာဝန်များကပြန်ပေါ်လာအဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေအချိန်များအတွက်ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါ undulating သင်တန်းကို fix ။ အဆိုပါ climacteric syndrome ရောဂါ၏လက္ခဏာအင်္ဂါရပ် - ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏နှောင့်အယှက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဦးနှောက်အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ။ အခြားအဖြစ်နိုင်သောသရုပ်များထဲတွင်ဆရာဝန်များကဖုန်းဆက်ပါ:
Psychoneurotic climacteric syndrome ရောဂါ
ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ဤအုပ်စုသည်များသောအားဖြင့်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏တစ်ဦးရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေခေါ်လိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြား၏ဤမျိုး၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာရာသီသံသရာ၏ချုပ်ရာအပြီးသတိထားမိဖို့စတင်။ သွေးထဲမှာဟော်မုန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချ, ဤမကြာခဏစိတျအပွောငျးအလဲ, အိပ်မပျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်နေသည်။ သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေ psychoneurotic သရုပ်အတွက်လည်းပါဝင်သည်:
လိင် drive ကိုလျော့နည်းသွားသည်။
Vasovegetative climacteric syndrome ရောဂါ
အဆိုပါနှလုံးသွေးကြောစနစ်၏ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့•အ climacteric syndrome ရောဂါ။ မကြာခဏသွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းမှု, ချွေးဂလင်း၏ amplification, နှလုံးစည်းချက်နှောင့်အယှက်အဆိုပါဝိသေသလက္ခဏာများ၏အသွင်အပြင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
ပူပြင်းတောက် - အရေပြားနီခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားအပူရုတ်တရက်ခံစားမှု,
သွေးဆုံးရောဂါ - ပြင်းထန်မှု
လက်တွေ့တွင်ဆရာဝန်များကတယောခွဲခြားအသုံးပြုပါ။ ၎င်း၏ရေးသားသူ VP Vikhlyaeva ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပူတောက်၏ကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်. ပြင်းထန်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီမှာ climacteric syndrome ရောဂါ၏ခွဲခြာအပေါ်အခြေခံသည်:
အဆင့် 1 (အပျော့စားပုံစံ), - တစ်နေ့လျှင်ပူထှကျသှား၏နံပါတ် (လူနာ 47% မှာတွေ့ရှိ) ကျော်ကို 10 ဖြစ်စဉ်များမဖြစ်သည့်အခါ။
အဆင့်2(အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှု) - အပူရုတ်တရက်ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်စဉ်များပူထှကျသှား၏နံပါတ်တစ်နေ့လျှင် 10-20 ဖြစ်စဉ်များ (အမြိုးသမီးမြား၏ 35%) ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်3သို့မဟုတ်ပါကဟုခေါ်တွင်ပါသည်အတိုင်း, မိုးသည်းထန်စွာသွေးဆုံးရောဂါ - ထှကျသှားတစ်နေ့လျှင် 20 ကျော်ကြိမ်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ခြုံငုံကျန်းမာရေးဆိုးရွား, တခါတရံတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သာမန်ဘဝဦးတည်သွားစေနှင့်တစ်ဦးဆေးရုံများတွင်ကုသခံရဖို့ရှိခဲ့လို့မရပါဘူး။
Climacteric syndrome ရောဂါ - ရောဂါ
အမျိုးသမီးတွေအတွက်သွေးဆုံးရောဂါအားအတည်ပြုအဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုသာအခြေစိုက်နိုင်ပြီးအချို့သောအရိပ်လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအလုံအလောက်မရှိကြပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရောဂါရှာဖွေရေးချိုးဖောက်မှုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ဒါဟာလည်းပါဝင်သည်:
ရာသီစက်ဝန်းတစ် parameter သည်၏စာရင်းကိုင် regularity သို့မဟုတ်မရှိခြင်း။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားကြောင်းဆင်တူတဲ့ symptomatology ရှိစေခြင်းငှါခြွင်းချက် comorbidities မျိုးဆက်ပွားစနစ်။
ဆရာဝန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, အထူးကု (fundus ၏အကဲဖြတ်) endocrinologist ဖြစ်သူ။
Climacteric syndrome ရောဂါ - ကုသမှု
climacteric syndrome ရောဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံကုသရမည်ဖြစ်သည်။ ကုထုံးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲသို့လူနာရဲ့အသက်, လက္ခဏာတွေပြင်းထန်မှု, ဟော်မုန်း status ကိုယူသည်ဆရာဝန်များကတစ်ဦးချင်းကိုတီထွင်သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင့်, မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုတက်ပေးခြင်း - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်ကုသမှုကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့၏အဖှဲ့အစညျးနှငျ့အစပျိုးသည်။ တိုတောင်းသောငါးမိနစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း climacteric syndrome ရောဂါ၏အသွင်အပြင်ကိုလျော့ချကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းနှလုံးသွေးကြောစနစ်၏လည်ပတ်တိုးတက်စေမသာ။
Climacteric syndrome ရောဂါ - လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသွေးဆုံးရောဂါဖော်ထုတ်လျှင်, ဆရာဝန်တွေဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအပေါ်အကြံပြုချက်များ data အားလုံးကိုစုဆောင်း, သာလူနာရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းတစ်ဦးအပြည့်အဝစာမေးပွဲအပြီးသူ့ကိုပေးပါ။ တိုက်ခိုက်မှုဒီရေများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချလက်ရှိကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်မမျှမတစ်လောကလုံးနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုသုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးထို့ကြောင့်ကုထုံးအစီအစဉ်အတွက်ဆရာဝန်များကတစ်ဦးချင်းကိုတီထွင်သည်ထူးခြား၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများ၏ကုသမှုပါဝင်နိုင်ပါသည်:
Climacteric syndrome ရောဂါ - ကုသမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ
အမျိုးသမီးတွေအတွက် climacteric syndrome ရောဂါကုသတင်းကျပ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကောက်ယူနေပါတယ်။ အခြေခံဆေးဝါးဟော်မုန်းပါစေ။ သောက်သုံးသော, ကုသမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်ဟောဒီမှာတစ်ဦးချင်းဆုံးဖြတ်သည်။ ရွေးဖို့လိုအပ်သောသွေးဆုံးရောဂါ, ကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအနက်:
အီစထိုဂျင် (သားအိမ်၏မလုံလောက်သောထုတ်လုပ်မှုလည်းမရှိသည့်အခါခန့်အပ်ထားသော): Femoston, Divina ။
Progestogens (သွေးဆုံးပူးတွဲမျိုးဆက်ပွားစနစ်၏ရောဂါများပြင်ပေးဖို့အသုံးပြု) Norkolut, Prozhestan, Utrozhestan ။
ပေါင်းလိုက်သောပါးစပ် contraceptives: Logest, Novinet ။
climacteric syndrome ရောဂါ၏ Prophylaxis
သွေးဆုံးရောဂါ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏ခေတ်သစ်နည်းစနစ်များဘဝနှင့်အစားအစာသူတို့ရဲ့ရိုးရာလမ်းတစ်ပြည့်စုံစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်ပါဝငျသညျ။ သိပ္ပံပညာရှင်များအချို့အစားအစာများနှင့်ဟင်းလျာများကိုစားခြင်း, အမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသွေးဆုံးအတူလိုက်ပါသောရောဂါလက္ခဏာလျှော့ချ, လိင်ဟော်မုန်း၏မရှိခြင်းများအတွက်လျော်ကြေးပေးနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ သေချာပေါက်နှစ်ပေါင်း 40 ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအစားအသောက်များတွင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်:
သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများ၏အန္တရာယ်များကို minimize လုပ်ဖို့, ဆရာဝန်တွေအကြံပေး:
အဆိုပါမီးယပ်သားဖွားမှာပုံမှန်ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေး (အနည်းဆုံး2ကြိမ်နှစ်က) ။
Calycectasis ကျောက်ကပ် - ကဘာလဲ?
အဆိုပါသားဥအိမ်များတွင်နာကျင်မှု - အကြောင်းတရားများ
အဆိုပါသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတူးမြောင်း၏ polyps - ထိုအကြောင်းတရားများ
Artificial သွေးဆုံး - ကဘာလဲ, ရောဂါလက္ခဏာတွေ, အကျိုးဆက်များ
ကျပ်ငရုတ်ကောင်း - တစ်စာရွက်
ကိုယ်ဝန်4သားဖွားအပတ်က
ဆီးထဲမှာချွဲ - စနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ?
ကင်ဝက်သား - ကိုအကောင်းဆုံးမီးဖို၌ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့် multivarka
Hydrangeas paniculata - အချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ပြင်ဆင်
အမည်မဲ့လက်ချောင်း Kylie Jenner သည့်မီးမောင်းထိုးအတွက်ပဲ!
အကြောင်းရင်းများ - ဖိအားနှင့်အတူ mammary ဂလင်း၏အထီးကျန်